Ny lalao mitondra fiara 5 tsara indrindra ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny lalao 5 mitondra fiara tsara indrindra ho an'ny iPhone
Raha mpankafy ny lalao mitondra fiara ary tianao ny hazakazaka mihazakazaka amin'ny iPhone ampiarahanay aminao ity famakafakana ity momba ny Lalao 5 ambony ny firazanana araka ny App Store hampahafantatra azy ireo raha mbola tsy nanapa-kevitra ny iray tamin'izy ireo ianao. Amin'ny ankapobeny, ny lalao hazakaza-tsoavaly ho an'ny iPhone dia ireo izay mirona hanana sary tsara indrindra ary manome fahatsapana zava-misy bebe kokoa, ankoatry ny fiara mitondra ny fanohanana gyroscope amin'ny fitaovana dia hiseho fa tena izy isika volante fiara.
Hanazava ny ireo fiasa lehibe mamakafaka ny tsirairay amin'ireto lalao manaraka ireto izahay araka ny filaharany fampidinana sy naoty ao amin'ny App Store: Real Racing 3, Asphalt 8: Airbone, filàna haingam-pandeha tadiavina indrindra, Colin McRae Rally ary F1 2011 Game.
Iray ihany amin'izy rehetra maimaim-poana mba hahafahantsika rehetra mankafy azy, eny, lalao io 'freemium', izany hoe, raha te handroso haingana isika dia tsy maintsy mandany vola tena izy, na dia mazava ho azy aza fa afaka ampandalovana ny lalao nefa tsy mila mandoa vola. ny sary Angamba izy ireo no tsara indrindra amin'ny App Store iray manontolo ary ny safidin'ireo fiara no mahatonga ity lalao noforonin'i EA ity ho an'ny olona tia lalao simulation, satria vita tsara izany, manome fahatsapana fiara tsara rehefa vaky sy mihintsana. Hatsarao ny fiaranao, ao anatin'izany ny orinasa lehibe iraisam-pirenena sy vaovao izay ampidirina amin'ny alàlan'ny fanavaozana mba hifaninana amin'ny karazana hetsika toa ny Cup, One against one, Time Attack ... ary ireo fitsapana rehetra ireo amin'ny namanao avy amin'ny Game Center, Facebook na Google+ tato ho ato miaraka amin'ny endri-javatra ny fiasa Time Shifted Multiplayer izay mamela ny fizarana amin'ny mpampiasa rehetra raha tsy mila mifandray izy roa miaraka.
Ny vao haingana rehetra, azo jerena ao amin'ny App Store Hatramin'ity herinandro ity ary efa nahatratra ny laharana voalohany amin'ny fangatahana fandoavam-bola eto amin'ny firenentsika, ny fizarana farany an'ny saga noforonin'i Gameloft, manatsara ny teo alohany tamin'ny sary tena misy, ny sazy ampiharin'ny fampiharana dia lalao io karazana arcade, izay tsy nanjakan'ny fiara tena izy, fa kosa ny orinasa dia naniry ny hamorona lalao frenetic izay ahafahantsika mandray fiolahana amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra izay hankafizantsika amin'ny hazakazaka, amin'ny fampiasana oksida nitrous hanao aerobatics izahay, manampy toerana vaovao 8 amin'ny hazakazaka, miaraka amin'ny boriborintany amin'ny toerana fanta-daza toa an'i London, Tokyo, Nevada, Islandy ... Miaraka amin'ny fiara avy amin'ny marika fanatanjahan-tena malaza toa ny Bugatti, Ferrari na Zonda. Ny vidin'ity fampiharana ity dia 0,89 € ary raha liana ianao dia azonao sintonina avy amin'ny App Store ao amin'ny rohy etsy ambany, io dia mikasika ny fotoana nahavoazana azy.
Mila haingam-pandeha tadiavina indrindra
Ao amin'ny lalao noforonin'ny Electronic Arts, mitohy ny sain'ny lalao mahomby consoles lalao, mamela anao hitondra fiara fanatanjahan-tena matanjaka raha manandrana mandositra ny polisy ianao amin'ny fanenjehana haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny boriborintany an-tanàn-dehibe malalaka. ny sary Izy ireo dia tondroin'ity karazana ity satria tsy ho be fialonana amin'ilay kinova ho an'ny konsol video izy ireo, ka hahazoany tombony betsaka amin'ny fitaovana an-tsary. Tsy maintsy mitady ny fiainanao ianao hamita ireo hazakazaka ary tsy handray maro fahasimban'ny fiaranao, izay tena ho tratra tsara amin'ny ambaratongam-pandrafetana sary, na dia ialana amin'ny mpanohitra, ny polisy na ny fiara izay mandehandeha malalaka eny amin'ny arabe sy ny làlambe. Io no lalao familiana nahomby indrindra tamin'ny 2012 ary mbola mitohy hatrany amin'ny toerana voalohany, miaraka amin'ireo mpampiasa an'arivony erak'izao tontolo izao, angamba noho ny fampiroboroboana ny vidiny izay natombok'ilay orinasa ho fahatsiarovana ny fisiany. Ny vidin'ity fampiharana ity dia izao 4,49 € angamba zavatra lafo ny manana herintaona fa noho ny kalitaon'ny lalao mendrika azy ireo.
Ny kilasika lalao famoriam-bahoaka saika efa nilalao daholo isika rehetra PlayStationCodemaster indray, ilay orinasa namorona azy, dia miandraikitra ny fampifanarahana ny kinova ho an'ny iOS. Ampidiro amin'ny alalàn'ny maha-ianao ity famakafakana ity ny isa tsara indrindra amin'ny karazany, Ity kinova ity ho an'ny idevices dia manamboatra endrika ny sary ary manatsara azy ireo, manampy boribory maherin'ny 30 ho an'ny faritra rehetra iadian-kevitra ireto sokajy ireto, fotaka, asfalta, loto, vatokely…. izany dia hanova ny fihetsika sy ny fikirakirana ny fiara. Ny lafy ratsy dia izay fiara Izy ireo koa dia kilasika, tsy izy ireo no itondrana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'izao fotoana izao, ny zavatra tsara mampiditra azy mpiara-manidina miaraka am-peo (izay amin'ny teny Anglisy) hanampy antsika amin'ny filaharana ary hanome antsika fahatsapana hazakazaka madio. Ny vidin'ity fampiharana ity dia 2,69 € Ary raha tianao ity karazana hazakazaka ity, dia lohateny ilaina ho anao izy io, azonao atao ny misintona azy avy amin'ity rohy manaraka ity rehetra izao ho an'ny fitaovana iOS rehetra.
Lalao F1 2011
Ilay zokiny indrindra amin'ireo anaram-boninahitra rehetra nodinihina fa tsy manam-paharoa amin'ny sokajy misy azy dia ilay lalao ofisialin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny Formula 1, Ahitana ny mpamily rehetra, ny ekipa, ny boriboritany ofisialy misy ny Tompondaka Eran-tany, mampahafantatra anao ny fahatsapana avy amin'ny iPhone-nao amin'ny fitondrana fiara Ferrari toa an'i Fernando Alonso. Azonao atao ny mampiasa ny SERIZY hiarovana anao amin'ny fahavalo izay manenjika anao hisambotra, fifaninanana amin'ny maody Grand Prix izay manome anao ny fahafahan'ny fiofanana hifanaraka amin'ny fizaran-tany, manao ny amboara mahafeno fepetra hanandrana handresy ny toerana voalohany eo amin'ny sehatra ary farany ny hazakazaka izay tsy maintsy hanomezanao 110% handresena azy ary hamono isa manandanja handresena ny tontolon'ny mpanamory fiaramanidina. Ny vidin'ny lalao ity satria izy no tranainy indrindra ary sary ratsy indrindra amin'ireo izay dinihintsika dia 0,89 € matoa nilatsaka be dia anao ity rohy hampidina azy amin'ny App Store.
Ireto ny lohateny 5 nodinihina, mety ilaina raha tianao ny lalao fiara, ianao manokana dia tiako ny ankamaroanareo amin'ny Real Racing 3 ho azy toetra ara-tsosialy, hatramin'ny lalao maimaim-poana dia manana mpampiasa betsaka indrindra eran'izao tontolo izao hifaninana izy ireo. Izy koa lafiny sary satria ny lalao toa an'i Colin McRae sy F1 2011 Game dia tena lany andro ary mila kinova vaovao ao amin'ny App Store.
Iza amin'ireo no hofidinao ary nahoana?
Fanazavana fanampiny - Asphalt 8: Misy ny Airbone ao amin'ny App Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao 5 mitondra fiara tsara indrindra ho an'ny iPhone
Fampitahana tsara, ny roa voalohany dia tena mahavariana; Nieritreritra ny hividy ny NFS aho, saingy toa tsy lafo loatra ny vidin'izy ireo, ka tsy mino aho.
Fa mba manatsara ny tsipelinao ...
0verohy dia hoy izy:
Asphalt 8: Airbone sy filàna haingam-pandeha tadiavina indrindra handray ny fifamatorana roa farany, fantatro fa ny sary tsara dia tsy ny zava-drehetra amin'ny lalao tsara, fa andriamanitra! Asphalt 8 dia tena mampino, nampidina 7 aho rehefa maimaim-poana ary ny tena marina dia ambany noho ny ankehitriny ny sary ary somary manaitra ihany koa, saingy ity asfalta vaovao ity dia manana azy rehetra, mozika azo isafidianana, fiara tsara endrika ary tsara lalana, mazava ho azy 100% fotsiny no ho tianao raha manana Ipod / iphone 5 na iphone 4s ianao satria ipod 4 manohana azy fa tsy ampy hanomezana traikefa tsara amin'ny lalao, na dia tsapako aza fa kely ity edisiôna ity amin'ny asfalta vaovao fa mbola tsara be.
Mamaly amin'ny 0verlink
Ahoana ny fomba hanaovana horonantsary amin'ny Instagram sy Vine toy ny pro